Cook Mampiharihary ny fizarana Wearables dia mety ho orinasa Fortune300 irery | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny fivoriana natao omaly ho an'ireo tompon-trosa marobe marika, Tim CEO, Apple Cook, dia nanome fampahalalana mifandraika amin'ny raharaham-barotra "azo anaovana" an'ny orinasa California.
Nampitahain'i Cook ny departemanta "azo anaovana" an'i Apple (na dia tsy tiany hiantso an'izao karazana vokatra izao aza izy), izay misy ny maodely Apple Watch, AirPods ary Beats, miaraka amin'ny orinasa tsy miankina ao anatin'ny Fortune 300Raha mijery ny tombom-barotra entin'ireto vokatra ireto amin'ny Apple mahery indrindra isika.
Tahaka ny fanao mahazatra amin'ny Apple, Cook dia tsy nanome angon-drakitra fivarotana marina na fizarana tsena, fa tsy misy miahiahy izany ny tsena amin'ity karazana vokatra ity dia mitombo, indrindra noho ny famantaranandron'i Apple, ary na eo aza ny fidiran'izy ireo farany amin'ny lalao.
Raha ny marina, ireo 3 volana farany ireo, voalohany amin'ny taom-piasana vaovao amin'ny orinasa, Ny fivarotana Apple Watch dia nitombo 50%, ary ny angon-drakitra dia miabo isan-kerinandro. Taorian'ny maodely Apple Watch, ny AirPods no mpandresy, miaraka amin'ny fizarana varotra avo kokoa noho ny nandrasana, ary izany no antony hamarotana azy ireo amin'ny ampahany betsaka amin'ny Apple Store.
Ho fanampin'izany, Cook dia nanisy lanja betsaka ny fivoarana hanatsarana ny fahasalamana sy ny fampidirana fampiharana amin'ireo fitaovantsika, ary manamafy fa mandray am-pahamatorana ireo karazana fandrosoana ireo i Apple hampihatra azy ireo araka izay haingana araka izay azo atao amin'ny akanjo fitafian'ny orinasa tsirairay avy.
Mikasika ny Apple Pay, Cook dia manome antoka fa ity serivisy vaovao ity dia ampiasaina kely noho izay efa nambara mialoha avy amin'ny foiben'i Apple, fa fiakarana no antenaina amin'ny antenatenan'ny taona 2018 ity.
Ireo data rehetra natolotry ny talen'ny CEO an'ny orinasa Cupertino ao amin'ny fivorian'ny tompon-trosa mamela antsika hanana sarin'ny refy izay mitantana ny vaovaon'ny teknolojia ho an'ny mpanjifa manerantany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Cook dia nanambara fa ny fizarazarana azo ampiasaina dia orinasa Fortune300 irery
Heveriko fa tena tsara ny fananana ireo varotra ireo ary miha mihatsara izy io, saingy tokony hijery ny fomba hampihenana ny vidiny hahatratrarana mpampiasa maro izy ireo.